I-imeyili Yakho Yokugcina Nokuqedela Thumela Uhlu Lokuhlola | Martech Zone
I-imeyili Yakho Yokugcina Nokuqedela Thumela Uhlu Lokuhlola!
Ayilokothi yehluleke… cishe kanye ngesonto ngithola i-imeyili enhle ebhokisini lami lokungenayo ebhalwe ukuthi i-FNAME noma iyikholaji yezithombe ezingenalutho engenawo omunye umbhalo. Noma ngiyithola ku i-retina display enezithombe eziyindida. Noma ngiyivula kuselula yami futhi angikwazi ukuyifunda ngoba i-imeyili yeselula yayingaphenduli.
I-imeyili yibhizinisi elingathi sína… kuyisaziso sohlelo lokusebenza esisuselwa kwimvume sokuthi ibhizinisi lakho lizozethulela ubuso balowo obhalisile. Ibhokisi lokungenayo le-imeyili ligcwele phama futhi wonke umuntu ufuna izaba zokwehlisa umthwalo nokuzikhipha ohlwini lwababhalisile. Akuthathi okuningi ukuvinjelwa, ukuphonswa kufolda ye-SPAM, ukususwa ngaphambi kokuvulwa, ukukhishwa ohlwini - noma okubi kakhulu - okubikwa njengo-SPAM.
Ithimba lama-imeyili Monks liphinde futhi, kusuka kwizeluleko ku ukufaka ividiyo ku-imeyili kulokhu - a uhlu lokuhlola olunzulu lwabathumeli be-imeyili ukuhamba ngaphambi kokuchofoza ukuthumela!
Isikhathi sokuthi uthumele i-imeyili kubabhalisile bakho futhi uyesaba cindezela THUMELA ngoba awuqiniseki ukuthi usuthole kahle, kodwa ungakhathazeki ukuthi amaMonks azokusiza futhi! Ngamabhizinisi asho ukuthi azokwenza ukwandisa ukusetshenziswa kokumaketha kwe-imeyili ngo-2014, kubalulekile ukuba nohlu lokuhlola olucacile okufanele lulandelwe ngaphambi kokushaya i-SEND. Ngakho-ke nayi ephelele yakho!
Uhlu lokuhlola lukuhambisa phakathi nokulethwa kwe-imeyili, ukuhambisana kweklayenti le-imeyili, ukuhlola kuqala kwebhokisi lokungenayo, nokuhlola kuqala okuvulekile ukuqinisekisa ukuthi konke kubukeka kukuhle futhi kusebenza kahle ngaphambi kokuthumela! Uma ungathanda, ungakwazi landa inguqulo yokuphrinta ukusetha edeskini lakho eduze kwakho!
Tags: KUNGENZEKA ukuthobela ugaxekilei-can-spamuhlu lokuhlolaama-imeyili analyticsama-analytics omkhankaso we-imeyiliuhlu lokuhlola i-imeyiliukuhambisana kweklayenti le-imeyiliuhlu lokuhlola lokulethwa kwe-imeyiliunyaweni we-imeyiliukufometha i-imeyili htmli-imeyili image alt tagsizixhumanisi ze-imeyiliimeyili preview evulekileukwenza ngezifiso i-imeyiliumbhalo ocacile we-imeyiliusuku lokuhlelwa kwe-imeyiliumbhalo we-imeyili snippetthumela izinkinobho zokwabelana nge-imeyiliukuhlolwa kogaxekile kwe-imeyiliumugqa wesihloko se-imeyiliisixhumanisi sokuzikhipha ohlwini se-imeyiliukubuka i-imeyili onlineama-imeyili ngehorakusuka ekheliniizithombe ze-alt tagsuhlu lwezempilouhlu lokuhlukaniswaukuhlolwa kokubukwaphendula ekheliniumugqa wesihlokoukukhuluma
I-Agile Marketing yi-Evolution, Hhayi Inguquko, nokuthi Kungani Kufanele Uyamukele